Binance ayaa qorshaynaysa in ay dhisaan xafiiska Islands Channel
Ka dib markii dhawaan dhismaha xafiis ee Malta, is-dhaafsiga ee ugu weyn dunida oo dhan by mugga ganacsiga, Binance, uu go'aansaday in uu furo xafiiska kale, Wakhtigan ee Islands Channel (Jersey jasiiradda, dhexeeya UK iyo France), siinaya dabacsanaan dheeraad ah oo ka hawlgala gudaha UK iyo suuqyada Yurub
"Istiraatiijiyad ballaarinta Global… Waxa kale oo ay u sameeyaan a aasaaska xoog hawl for ballaarinta our inta kale ee Europe galay "ayuu yiri Binance CEO Zhao Changpeng.
quruun waxay leedahay xaaladaha gaarka ah iyo canshuurta wanaagsan loogu talagalay ganacsatada doonaya in ay halkaas ka dhiseen xisaabaadka maaliyadeed. Binance yeelan doonaan in ay bixiyaan a 10% canshuur ay dakhli.
Coinbase bilawday fund index crypto
Crypto Rafaa Coinbase ku dhawaaqday in ay fund index cryptocurrency, ugu horeysay shaaca ka qaaday in March, waa hadda u furan maal ee Maraykanka.
Shirkadda ayaa sheegay in post blog ah in uu arkay xiisaha "baaxad weyn" ka maal-, iyo hadda waxaa la gaarey baxay in kuwa doonaya in ay maalgashadaan u dhexeeya $250,000 iyo $20 million. Hadda, shirkadda ayaa sheegay in, ka qaybgalka waxaa ku koobnayn laga xoreeyo dalka ah. iyo kuwa maal-la aqoonsan yahay.
Coinbase Index Fund siinayaa maal-gaadhista oo dhan hantida ku qoran is-dhaafsiga, miisaamaa hantida suuqa.
Coinbase sheegeen in ay ka shaqaynayso in ay bilaabi lacagaha kale ee "ay heli karaan dhammaan maal iyo dabooli kala duwan oo ballaadhan hantida digital" sidaas, haddii aadan laga xoreeyo dalka la aqoonsan yahay. Maal, waxaa laga yaabaa in fursadaha aad ku xiran tahay waxa ka soo soo socda.
Zug imtixaamaa Blockchain in ay go'aan ka rashka iyo IDs digital
Magaalada Zug, guriga ee Cryptotal Swiss ah, dadka deggan yeedhi ah cod blockchain tijaabo ah. Waxay la filayaa in ay is dhaafsadaan ra'yigaaga ku saabsan mawduucyada kala duwan ee muhiimadda ay leedahay degaanka, oo ay ku jiraan rashka lagu jiro Festival harada sanadlaha ah iyo isticmaalka baas digital si aad u amaahatid buugaagta iyo bixiyaan lacagta la dhigto.
Report Kraken Daily Market for 12.06.2018
$197M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
"Seeraar si ballaaran BOGSADO,...